🥇 ▷ Goorma ayuu Android 10 gaari doonaa Google Pixel? ✅
Goorma ayuu Android 10 gaari doonaa Google Pixel?
Toddobaadkii hore Google waxay la yaab ku noqotay dadka iska leh iyo kuwa shisheeyaha ahba magaca cusub ee Android Q: Markii aan dhamaanteen fileynay magac macaan oo tixraac toos ah u leh mid ka mid ah macmacaankii caadiga ahaa ee ay isticmaashay shirkada, ugu dambeyntii shirkadda weyn ee internetka ayaa iska fogeysay taariikhdeeda waxayna ku dhawaaqday bilaabida Android 10. Goorma ayey gaari doontaa taleefannadii ugu horreeyay ee la jaan qaadi kara?
Mar haddii aan dib u eegnay dhammaan taleefannadii heli doona Android 10, oo ay soo habeeyeen soo-saareyaal, waa waqtigii la is-waafajin lahaa kaasoo noqon lahaa taleefannadii ugu horreeyay ee la cusboonaysiinayo nidaamka ugu dambeeya ee hawlgalka Google. Sida iska cad, sidii ay u dhacday sannado kale, iyaga ayaa iska leh Telefoonada Google waxay noqon doonaan kuwa ugu nasiibka badan ee la helo, kahor intaan qof kale jirin, Android 10.
Marka hore Pixels, usbuuca soo socda
Marka loo eego taageerada farsamada ee Google, Android 10 bilaabi doontaa inuu gaaro Google Pixel muddo toddobaad gudihiis ah. Waxay noqon doontaa Talaadada soo socota, Sebtembar 3, marka astaanta ay sii deynayso barnaamijkeeda kombuyuutar ee Google Pixel 3. Sidaa daraadeed jawaabta Google ee qaar ka mid ah isticmaaleyaasha xiiseynayay nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka.
Cusboonaysiinta ayaa xaqiiqdi imaan doonta, sidaan horay u sheegnay, marka hore Pixel 3/3 XL, 3aad / 3aad XL, sida qabashadu sheegtay. Aaladaha sanadkii hore, Pixel 2 iyo Pixel 2 XL waxay noqon lahaayeen taleefannada shirkadda ee soo socota si ay u helaan softiweerka halka moodellada ka sii weyn ee buuggyaraha Google ay sidoo kale lahaan doonaan Android 10 inkasta oo uu ka maqnaa daaqaddiisa taageerada laba sano.
Waxaa ka mid ah astaamaha cusub ee Google ay ku dareyso nidaamkeeda cusub ee hawlgalka waxaanan ka helnaa taageerada asalka ah ee laalaabashada taleefannada, howlaha la waafajiyay shabakadaha 5G, soo bandhig hoosaad live ah, howlo jawaabeed caqli leh, dejinta ficillada, iyo sidoo kale qaababka caadiga ah ee horumarka amniga iyo asturnaanta. Astaamaha kale ee mudan in la xuso waa cusbooneysiinta asalka firfircoon, aaladaha xakamaynta waalidnimada iyo, dabcan, qaabka mugdiga ee la doonayo.
Ka sokow Google Pixel, waxaa la rajaynayaa ka hor dhamaadka sanadkaan moobiillada kale inay heli doonaan raashinkooda u dhigma ee Android 10. Waxaa la yaab leh, soo-saarkii ugu horreeyay ee ku faana inay ahayd Huawei, oo leh EMUI 10, oo ku saleysan software-ka ugu dambeeyay ee Google, ayaa imaan doona Huawei P30 iyo Huawei P30 Pro (foomka beta) sidoo kale usbuuca soo socda, gaar ahaan Axadda, Sebtembar 8. Waxaan qiyaasaynaa in heerarka sare ee Samsung, LG, Nokia iyo Sony sidoo kale la cusbooneysiin doono bilaha soo socda.